အမေပြောသောမိန့်ခွန်းများ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
December 5, 2006, 11:41 am Filed under: DawAungSanSuKyi ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၁၉၈၈ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းများကို ပြန်လည်ပေါင်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျမကို ဒီမိန့်ခွန်းများ ပို့ပေးခဲ့သော အိုးဝေမှ ဦးလေးအား ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါသည်။ အချိန်ကုန်ခံ ရိုက်ပေးထားသော မိန့်ခွန်းများကို ဖတ်ရင်း အသိများပွင့်လာပါစေဟု ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
Ø လှုပ်ရှားမှုကြီးကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျမပြောစရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားလူငယ်များဟာ အင်မတန်မှတော်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်ရုံးကိုလည်း ပြပြီးပါပြီ။ အခုလည်း ဆက်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ နှလုံးရည်ကို ပြမယ်ဆိုတာ ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ Ø အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူလူထုဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်ကန့်သတ် စေခိုင်းထားတဲ့ သစ္စာအရှိဆုံး ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ရမယ်။
Ø ဒီတိုင်းပြည် ၊ ဒီမြေကြီးဟာ အင်မတန်မှ ချမ်းသာတယ်။ ပြည်သူလူထုက အင်မတန်မှ ဆင်းရဲနေတယ်။ ဒါ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲ။ ဒီတိုင်းပြည် ဒီမြေကြီးဟာ ဒီလောက်တောင်မှ ချမ်းသာနေရင် မှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းနဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးဆောင်သွားမယ့် အစိုးရများဟာ ပြည်သူလူထုကိုလည်း ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်။ Ø အများပြည်သူလူထု စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူဆိုတာ အင်မတန်မှ ရှက်စရာကောင်းတယ်။ ဒီလောက်တောင်မှ ကိုယ့်ဘေးက လူအများ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလျက်သားနဲ့ ကိုယ်က စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်မှာ လူ့နှလုံးသားမရှလို့ပဲလို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ၊ ကိုယ့်မိသားစု ၊ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းပဲ စိတ်ချမ်းသာရင် တော်ပြီလို့ဆိုတဲ့သူများဟာ လူမဆန်ပါဘူး။
Ø အခုတိုက်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း တိုက်ပွဲသဘောမျိုးဖြစ်မယ်လို့ အင်မတန်မှ ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီမိုကရေစီအတွက် လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာ အမှန်တရားကို အောင်မြင်စေချင်လို့။ အများအကျိုးအတွက် ဖြစ်စေချင်လို့ လှုပ်ရှားတာပဲ။ ကိုယ်ကျိုးအမြတ်ထွက်ချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မဆုံးရှုံးမနစ်နာစေချင်ဘူး။ အဲဒီတော့ အမှန်တရားကို အောင်မြင်စေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ ကျမတို့အားလုံးဆက်လုပ်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ Ø မြန်မာနိုင်ငံလို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာ ချမ်းသာနေရတာဟာ အင်မတန် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာ မရှက်သင့်တဲ့နေရာမှာ ရှက်နေကြပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမား ကျေးလက်လူထုက ထမင်းနှစ်နပ်ကို အနိုင်နိုင်စားနေရချိန်မှာ တချို့က ငါးနပ်ခြောက်နပ်စားနေတာ ရှက်စရာပါ။ တကယ် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီး စိတ်သဘောထား မြင့်မြတ်တဲ့လူများအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိမိချမ်းသာဖို့ကြိုးစားရတာဟာ ရှက်စရာ ဘယ်လောက်ကောင်းမလည်းလို့ တွေးထင်ကြမှာပါ။
December 10, 2006 @ 12:03 pm Reply	Um… I’m so sad to listening the song “National Destroyer”…Why the destiny of our nation is like this. why? why? why?… (crying)…
December 13, 2006 @ 4:23 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI